Siyaasadda Soo Celinta - Milyan Sameeyayaal
Fadlan hoosta ka raadi siyaasadii ugu dambeysay ee Milyan Sameeyayaasha ("Refund Policy").
Fadlan si taxaddar leh u aqri siyaasaddan iyo shuruudaha iyo shuruudaha soo celinta adeegyada iyo alaabooyinka la dalbaday iyo / ama rukhsadaha (yaasha) alaabada Milyan Sameeyayaasha (“Wax soo saarka”), Adeegyada Milyan Sameeyayaasha (“Adeegyada”), iyo bogga Milyan Sameeyayaasha https://www.MillionMakers.com/ (“Websaydh”) ama subdomain (yada) ama khadka tooska ah ee xafiisyada ama dhismaha.
QAADASHADA IYO JOOJINTA ALAABTA IYO ADEEGYADA
Wax lacag celin ah lama bixin karo ama lama bixin karo ama lama fulin karo mar alla markii amarka macmiilka ay fuliyaan Milyan Sameeyayaal iyo / ama MM Solutions INC iyo / ama Milyan Sameeyeyaal LLC iyo / ama MM LLC iyo / ama Million Sameeyayaal Solutions INC iyo / ama MM LTD. iyo / ama Milyan Sameeyayaal LTD. qayb ahaan ama buuxa. Wax lacag celin ah lama sameyn doono halka Milyan Sameeyayaashu ku qasban yihiin inay diidaan iyo / ama joojiyaan inay bixiyaan Adeegyo sababo la xiriira jebinta macmiilka damaanadaha, waajibaadka iyo fulinta sida ku cad Shuruudaha iyo Xaaladaha.
Khidmadaha la-tashiga ama khidmadaha sharciga marna laguma soo celin karo alaab ama adeeg kasta ama la-talin mar haddii la bilaabo sharci iyo / ama la-talin ganacsi.
Haddii Macaamiilku iibsado mid ka mid ah adeegyada khadka tooska ah ama khadka tooska ah iyada oo loo marayo mid ka mid ah degellada Million Makers, koontooyinka warbaahinta bulshada iyo go'aansashada in la joojiyo amarka ka hor inta Milyan Sameeyayaashu aysan billaabin fulinta amarkan oo kale, Milyan Sameeyayaashu waxay soo celin doonaan dhammaan lacagaha uu Macmiilku bixiyo. , marka laga reebo khidmadda maamulka ee US $ 250, oo ay ku jiraan khidmadaha baayacmushtarka, khidmadaha ka baaraandegidda dalabka iyo kharashyada kale ee shilalka ah. Soo celinta waxaa lagu dalban karaa 2 maalmood gudahood laga bilaabo maalinta lacag bixinta. Wax lacag celin ah lama siin doono sheegashooyin ka badan 2 maalmood taariikheed, waa macquul, amarka waxaa si toos ah u fulinaya macmiilku isagoo amar ku bixinaya Adeegyada VoIP ama Adeegyada Xafiiska Virtual, iwm, haddii ay sidaas tahay wax lacag celin ah suurtagal ma ahan mar uun haddii amarka uu amro macmiilku .
Haddii Milyan Sameeyayaashu ay joojiyaan inay bixiyaan Adeegyo ama Macaamiilku kula taliyo Million Makers in aysan mar dambe u baahnayn Hay'ad, Macaamiilku waa inuu siiyaa Million Makers wixii khidmad ah ee horay u jiray, oo weli baaqi ku ah iyo khidmadaha ama kharashyada, oo ay la kulmi karaan Million ku dhufashada, kala-dirista, daadinta ama wareejinta Hay'adda, oo ay ku jiraan wareejinta, iyo joojinta ama bixitaanka Milyan Sameeyayaasha.
Marka laga hadlayo wareejinta maamulka ee Hay'ad kale adeeg bixiye, Milyan sameeyayaal ayaa qaadi doona, macmiilkuna wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu bixiyo, wareejinta, ama joojinta, ama bixitaanka lacagta, ama khidmadda sii deynta shirkadda si waafaqsan jadwalka ujrada ansax ah taariikhda wareejinta, oo ay weheliso dhammaan khidmadaha taagan ee lagu leeyahay oo lagu leeyahay Macaamiisha Milyan Sameeyayaasha iyo / ama MM Solutions INC iyo / ama Million Sameeyayaasha LLC iyo / ama MM LLC iyo / ama Million Sameeyayaasha Xalalka INC iyo / ama MM LTD. iyo / ama Milyan Sameeyayaal LTD. ilaa taariikhda wareejintaas.
Sababtoo ah joojinta adeegyada macaamiisha ee Million Makers, siyaasadda joojinta ee hoos ku xusan iyo tan shuruudaha iyo xaaladaha bogga waa lagu dabaqi karaa.
Waad joojin kartaa heshiiskaaga oo waxaad ku xidhi kartaa koontadaada Million Makers wakhti kasta, oo dhaqangalaya maalinta ugu dambeysa ee muddada rukunkaaga, adoo u diraya emayl info@MillionMakers.com. Milyan Sameeyayaashu way joojin karaan xidhiidhkooda adiga, ama way joojin karaan ama joojin karaan marin u helka Websaydhka, Alaabada, iyo / ama Adeegyada wakhti kasta, oo ay ku jiraan isticmaalka softiweer kasta,
haddii aad jebiso Shuruudahaan iyo / ama heshiis kasta oo kale oo lala galo Milyan Sameeyayaal;
haddii Milyan Sameeyayaashu si macquul ah uga shakiyaan inaad isticmaaleyso Websaydhka, Alaabada, iyo / ama Adeegyada si aad ugu xad gudubto sharciga ama aad ugu xadgudubto xuquuqda dhinac saddexaad;
haddii Milyan Sameeyayaashu si macquul ah uga shakiyaan inaad isku dayeyso inaad si xaq-darro ah uga faa'iideysato ama aad si qaldan u adeegsato siyaasadaha Million Makers;
haddii Milyan Sameeyayaashu si macquul ah uga shakiyaan inaad u isticmaalayso Websaydhada, Badeecadaha, iyo / ama Adeegyada si khiyaano ah, ama in Badeecado ama Adeegyo lagaa siiyay ay koox saddexaad u adeegsato si khiyaano ah;
haddii aad ku guuldaraysato inaad bixiso wax lacag ah oo ay ugu wacan tahay Milyan sameeyeyaasha;
waxaad jebineysaa sharci ama qaanuun kasta oo quseeya. Markaad joojiso koontadaada Million Makers sababahan kor ku xusan, ma jiraan wax lacag celin ah oo lagugu soo celinayo oo waa laguu diidi doonaa inaad gasho Websaydhka, Alaabada iyo / ama Adeegyada, oo ay ku jiraan dhammaan xogteeda.
Milyan Sameeyayaashu way joojin karaan heshiis kasta oo marin u ah koontadaada, haddii Adeegyada ama qayb kasta oo ka mid ah, hadda wixii ka dambeeya sharci ahaan laga heli karin xukunkaaga, ama ayan hadda ka dib ganacsi ahaan u shaqeyn karin, iyadoo ay ikhtiyaar u tahay Million Makers ..
Haddii aad rumeysan tahay in Milyan Sameeyayaashu ay ku guuldareysteen inay qabtaan ama Adeegyadu cilladaysan yihiin, waa inaad ku wargelisaa Milyan Sameeyayaal qoraal ahaan oo aad u oggolaataa soddon (30) maalmood inay Milyan Sameeyayaashu ku daaweeyaan cilladda. Haddii Milyan Sameeyayaashu ay ku bogsadaan cilladda gudaheeda muddadan daaweynta, Milyan sameeyayaashu ma noqon doonaan kuwa cilad qaba oo mas'uul kama noqon karo waxyeellooyin iyo / ama khasaarooyin la xiriira dib u dhacaas. Haddii Milyan Sameeyayaashu aysan ku bogsan cilladda ku jirta muddadan daweynta ah, waad joojin kartaa rukhsadda isla markaaba, ogeysiis qoraal ah oo ku socda Million Makers.
Iibsashada Alaabada iyo / ama Adeegyada, waxaad ogolaatay inaad siiso Milyan Sameeyayaal iyo / ama MM Solutions INC iyo / ama Milyan Sameeyeyaal LLC iyo / ama MM LLC iyo / ama Million Sameeyayaal Solutions INC iyo / ama MM LTD. iyo / ama Milyan Sameeyayaal LTD. kharashka / khidmadaha bilowga ah iyo khidmadaha rukunka sannadlaha ah ee lagu muujiyey Badeecada ama Adeeggan oo kale. Lacag bixintu waxay noqon doontaa laga bilaabo maalinta ugu horeysa ee aad iska diiwaan galiso Badeecad iyo / ama Adeegyo, waxayna dabooli doontaa bil kasta, seddexdii biloodba, sanad badhkeed ama sanadle ah, sida lagu tilmaamay markii aad isdiiwaangelineyso oo aad bixinaysid khidmadaha cusboonaysiinta marka la cusboonaysiiyo.
Qaabeynta iyo qiimaha Websaydhka, Alaabada, iyo / ama Adeegyadu way is beddeli karaan wakhti kasta, Milyan sameeyayaashuna waxay xaq u leeyihiin inay had iyo jeer xaq u leeyihiin inay wax ka beddelaan qaabeynta, ujrooyinka, qiimayaasha iyo sheegashooyinka, haddii aysan jirin wax isbeddel ah oo sicir lagu sameyn doono. adiga inta lagu jiro mudada rukunka, oo waxay dhaqan geleysaa oo keliya Milyan Sameeyayaasha kadib waxaadna oggolaatay kordhin, cusbooneysiin ama cusbooneysiin muddada heshiiska. Waxaad ogolaatay isbeddelada noocaas ah haddii aadan ku diidin qoraal Million Makers gudahood saddex (3) maalmood oo shaqo gudahood marka la helo ogeysiiska Million Makers, ama qaansheegad, lagu daro ama lagu dhawaaqo khidmadda iyo / ama qiimaha isbeddelada. Dhammaan qiimayaashu waa kuwo gaar u ah, waana inaad bixisaa dhammaan canshuuraha, waajibaadka, canshuuraha ama khidmadaha, ama kharashyada kale ee la midka ah ee lagu soo rogo Milyan Sameeyayaasha ama naftaada hay'ad canshuur oo kasta (oo aan ka ahayn canshuuraha lagu soo rogay dakhliga Million Makers), ee la xidhiidha amarkaaga, illaa waxaad siisay Milyan Sameeyayaal shahaadada ku habboon iibinta ama ka dhaafida goobta geynta, taas oo ah meesha alaabada iyo / ama Adeegyada lagu isticmaalo ama lagu qabto. Haddii wax laga beddelo sharciga sida in canshuuraha la qaado oo noqda ama noqda mid aan laga soo kaban karin iyadoo ay sabab u tahay kordhinta kharashka ku baxaya Million Makers ee gaarsiinta Alaabada iyo / ama Adeegyada, taas oo illaa iyo inta ay Milyan Sameeyayaashu xaq u leeyihiin inay kordhiyaan qiimahooda si waafaqsan iyo dib-u-socod.